News Collection: पूर्वपतिको आलिङ्गनमा पूजा !
पूर्वपतिको आलिङ्गनमा पूजा !
आफ्नो एल्बम 'कसरी सम्झाउँ'को रिलिजका क्रममा अभिनेत्री पूजा चन्दले चारवर्षअघि अलग्गिएका पूर्वपति सुरज चन्दसँग गेटुगेदर गरिन् । पूर्वपत्नीको निम्तोमा एल्बम लोकार्पण जमघटमा पुगेका सुरजलाई पूजाले आलिङ्गनमा बाँधिन् पनि । प्रतिक्रीयामा सुरजले सोधे -हाउ यू ? पूजाले जवाफ दिइन् -फाइन् । दुवैले चारवर्षपछिको भेटमा मीठो मुस्कान छरे र औपचारिक ग्रीटिङ्स आदानप्रदान गरे ।
सबैको अपेक्षा बिपरित पूजाको निम्तोमा सुरज त्यहाँ पुगे । समारोहको पछिल्लो भागमा साथीहरुसँग बसेका सुरज मन्चमा बसेकी पूजाको मुहारमा हेर्थे र साथीहरुसँग गफगाफ गर्थे । पूजाको आँखा पनि प्रायशः सुरज बसेको प्यासेजतिर तेर्सिन्थियो । एल्बमको शीर्ष गीत 'कसरी सम्झाउँ'को म्युजिक भिडियो रिलिज सकिने वित्तिकै सुरज मिडियाकर्मीको आँखा छलेर जमघटबाट बाहिरिएका थिए । जाने बेलामा स्वयम पूजासँग पनि उनले बिदा मागेनन् ।
अग्रभागमा बसेका निर्देशक दिनेश डिसीले पूजाका सबै गीत उनको वास्तविक जीवनसँग मिलेको भन्दै सुरजलाई जिस्काइरहेका थिए । एल्बम बिमोचन गरेका निर्देशक यादव खरेलले गीतको चर्चा गर्दा दुवैलाई उपस्थितहरुले मुखामुख पनि गरेका थिए । स्रोतका अनुसार चारवर्षपछि पूजा र सुरजको भेट भएको हो । अमेरिका फर्कनु साताअघि मात्र पूजाले दोस्रोपटक आफू गीतकार रहेको एल्बम 'कसरी सम्झाउँ' विमोचन गरेकी हुन् । दुईवर्षअघि अमेरिकामै एल्बम रिलिज भैसकेको थियो ।
यो एल्बमलाई म्युजिक नेपालले बजारमा ल्याएको हो । दस गीत रहेको एल्बममा माया, बिछोड, देशप्रेम, दुःख र रोमान्टिक रचना छन् । पारिवारिक विछोडलाई खप्न नसकेर लेखेको गीत 'यो नौलो ठाउँ' पनि एल्बममा समावेश छ । एल्बममा सपनाश्री, रामकृष्ण ढकाल, रिमा गुरुङ, सुनिल बर्देवा, थुप्देन भुटिया, पवित्रा सुब्बा, इश्वर अमात्य, यम बराल र सन्जय खड्गीले स्वर दिएका छन् । संगीत अनिल शाही, न्यहू बज्राचार्य, शक्तिवल्लभ, राजु सिँह, सुनिल बर्देवा, सचिन सिँह र वीरेनकुमार शाक्यले संगीत दिएका छन् । म्युजिक भिडियो निर्देशन प्रसन्न पौडेलले गरेका हुन् ।